Midowga Yurub oo diiday Muddo kordhinta baarlamaanka kuna hanjabay tilaabo dheeri ah – Radio Daljir
Abriil 13, 2021 4:01 g 2
Ururka Midowga Yurub ayaa si adag uga soo horjeestay tilaabadii sharci darada aheyd ee shalay ay qaadeen baarlamanka Soomaaliya ee Muddo kordhinta labada Sano ah loogu sameeyay Madaxweyne Farmaajo.
Ciidamo ka tirsan Guutooyinka Haramacad iyo Gorgor oo Gaalkacyo lagu soo dhaweyeey (Sawiro)
bashir 4 weeks ago
Midiwga yurub maxaa dhex galiyay hawla heena anaguna ma dhex galno haw la hooda
EU du ma ogola mana aaminsana wax extension la yidhaahdo waayo iyaguba kuma dhaqmaan extension. Kolka siday ugu ogalaani ciyaalkooda somaliya jooga inay isticmaalan wax lidi ku ah democracy ga.
Mida labaad EU du ma tagarsana team Farmaajo marka runta laga hadlo.
Somalidu wa dad is dhigasho badan wan ta keenta mar walba in loogu daro